HighQuality Latex မှတ်ဉာဏ်မြှုပ်ခေါင်းအုံးလက်ကား -Rayson Spring Mattress Manufacturer | Rayson
အိတ်ကပ်နွေ ဦး မွေ့ရာလှိမ့်
အိတ်ကပ်နွေ ဦး မွေ့ရာ
ကြယ် ၄ ပွင့်ဟိုတယ်မွေ့ရာ
ဟိုတယ် Bed Base
Polyester Fiber ခေါင်းအုံး
Professional Value Collection ခေါင်းအုံး Top Queen Size Mattress ထုတ်လုပ်သူများ
ဈေးနှုန်းချိုသာသော -Rayson ဖြင့် ၀ ါးမှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်ခေါင်းအုံး
Best Sale စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားမှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်ကြော်ငြာခြင်းခေါင်းအုံးထုတ်လုပ်သူများ
HighQuality Latex မှတ်ဉာဏ်မြှုပ်ခေါင်းအုံးလက်ကား -Rayson Spring Mattress Manufacturer
Rayson Rayson စက်မှုဇုန်၊ Huasha လမ်း၊ Shishan၊ Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China ။ အဓိကထုတ်ကုန်များ HighQuality Latex မှတ်ဉာဏ်မြှုပ်ခေါင်းအုံးလက်ကား - ရေဇွန်နွေ ဦး မှေ့ရာထုတ်လုပ်သူ
Rayson Global Co. , Ltd သည် Foshan High-Tech Zone တွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ် - အမေရိကန်ဖက်စပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Volkswagen, Honda Auto နှင့် Chimei Innolux ကဲ့သို့ကျော်ကြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနီးတွင်ရှိသည်။
The facto ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဖောက်သည်များထံလုံခြုံစိတ်ချ။ ပို့ဆောင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက， ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့ခြင်းသည်အချိန်မီဖြစ်ပြီးဖောက်သည်တိုင်း၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယခုအချိန်အထိ Rayson သည်နိုင်ငံတကာ၏အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်အပါအဝင်ထုတ်ကုန်အားလုံး ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသည်။
ဘယ်လိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေကိုသင်လက်ခံပါသလဲ TT, 30% Deposi နှင့် 70% ချိန်ခွင်လျှာသည် LC တွင်မြင်တွေ့ရသည်မှာအလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်းတင်ပို့သောစာရွက်စာတမ်းများ၏မိတ္တူများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏လိုဂိုကိုအသုံးပြုရန်ကူညီနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အညီမွေ့ရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်ကုန်ပစ္စည်းအနုပညာသို့မဟုတ်လိုဂိုဓာတ်ပုံများပေးရန်သင့်အားလိုအပ်ရုံမျှသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သိုလှောင်ထားသောမွေ့ရာများကိုမည်သို့ဖြုတ်ရမည်နည်း။ ၁။ သင်၏အိပ်ခန်းအတွင်းရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသေတ္တာကိုသေတ္တာထဲထည့်ပြီးသေသေချာချာဆွဲထုတ်ပြီးအိပ်ရာပေါ်တင်လိုက်ပါ။ ၂။ အပြင်ဘက်အိတ်ကိုပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်း၌ထားခြင်းသို့မဟုတ်မွေ့ရာကိုမဖြတ်ရန်ဓားဖြင့်တရားစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။ ၃ 4. မွေ့ရာသည်ချက်ချင်း decompress မှစတင်သည်နှင့်ပလတ်စတစ်အိတ်အားဖယ်ထုတ်ပြီးနာရီနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပလတ်စတစ်အိတ်ကိုသတိထားပါ။ 5. သင့်မွေ့ယာအသစ်ကိုအပြည့်အဝချဲ့ထွင်ရန် ၂၄ နာရီခွင့်ပြုပါ။